Warbixin: Manchester United oo baadi goob ugu jirta saxiixa labo ciyaaryahan kahor inta uusan xirmin suuqa. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Manchester United oo baadi goob ugu jirta saxiixa labo ciyaaryahan kahor inta uusan xirmin suuqa.
Warbixin: Manchester United oo baadi goob ugu jirta saxiixa labo ciyaaryahan kahor inta uusan xirmin suuqa.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 30-08-16 12:10 PM Manchester United ayaa dooneysa iney la saxiixato labo daafac kahor inta uusan xermin suuqa kala iibsiga xagaaga sida lagu xusay majalada Daily Record.
Warbixinta ayaa qoreysay in macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho uu diirada saartay qaabkii uu ku heli lahaa daafacyada kala ah Fabinho iyo Jose Fonte isaga oo doonayo inuu ku xoojiyo daafaciisa.
United ayaase loogaaaga fadhiyaa iney iska iibiso labo kamid ah ciyaaryahanadeeda kahor inta aysan lasoo saxiixan daafacyadan, waxaase loo badinayaa iney daaqada ka baxaan xidigaha kala ah Marcos Rojo iyo Matteo Darmain kuwaas oo u kala dhashay dalalka Argentine iyo Talyaaniga.
Manchester oo dhawaanahan lala xiriirinayey iney lasoo saxiixaneyso labadan daafac ayaa u muuqata mid aan weli ka quusan baadi goobka ay ugu jirto saxiixooda waa Fonte iyo Fabinho, kuwaas oo ay macquul tahay iney yimaadaan gegida Old Trafford kahor inta uusan xermin suuqa kala iibsiga ciyaaryahanda.
Hadii ay u suurta gasho kooxda United saxiixa labadan xidig waxaa lasoo tabinayaa iney noqon doonto koox awood ahaan dhameystiran, iyaga oo dhiig cusub ku shubi kara kooxda Jose Mourinho uu horboodaha u yahay, wallow uu arinkan ka gaabsan macalin Mourinho.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in kooxda Manchester United ay ku jirto xilli ciyaareed wanaagsan iyada oo guul gaartay dhamaan sedexdii kulan oo ay ciyaartay horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan.